Madaxweyne Kuxgeenka Puntland oo Lagu Soo Dhaweeyey Magaaladda Kismaayo[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Kuxgeenka Puntland oo Lagu Soo Dhaweeyey Magaaladda Kismaayo[Sawirro]
Madaxweyne kuxigeenka Dawladda Puntland Iyo Wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey magaaladda Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland.
Madaxweyne kuxigeenka labaad ee Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere ayaa kusoo dhaweeyey Wafdiga garoonka diyaaradaha ee magaaladda Kismaayo ,dadweyne iyo wasiiro kale.
Madaxweyne kuxigeenka labaad ee Jubbaland Cabdiqaadir Lugadheere oo Saxaafada la hadlay ayaa sheegay iney si weyn ugu faraxsanyihiin in Madaxda Puntland kusoo dhaweeyaan Kismaayo si ay uga qeybgalaan Caleema-saarka Baarlamaanka Jubbaland.
Madaxweyne kuxigeenka Dawladda Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Camey ayaa sheegay dhankiisa in uu ku faraxsanyahay imaatinka magaaladda Kismaayo ,isagoona u mahadceliyey dadweynihii sida weyn ugu soo dhaweeyey magaaladda .
Madaxda Puntland iyo kuwa Jubbaland gaar ahaana Mudane Camey iyo Axmed Madoobe ayaa kulan ku qaatay aqalka Madaxtooyada Jubbaland iyagoona kawada hadlay arrimaha labada maamul.
Booqashadan ayey u noqoneysa tii labaad uu ku tago magaaladda Kismaayo Madaxweyne kuxigeenka Dawladda Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Camey ,waxaana lagu wadaa maalinta berito ah iney ka qabsoonto xaflada Caleema- saarka baarlamaanka Jubbaland.